Xog: Maxaa Somalia ka quseeya shirka Natanyahu & Hailemariam - Caasimada Online
Home Warar Xog: Maxaa Somalia ka quseeya shirka Natanyahu & Hailemariam
Xog: Maxaa Somalia ka quseeya shirka Natanyahu & Hailemariam
Addis Ababa (Caasimada Online) – Wararka aan ka heleyno magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa sheegaya in maanta kulan gaar ah oo ku saabsan arimaha amaanka ee gobolka uu dhexmarayo ra’iisul wasaaraha Yahuuda iyo r/wasaaraha Ethiopia.
Ethiopia ayaa ciidamo badan waxay kaga sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambe lagu biiriyay howlgalka AMISOM ee ka socdo dalka Soomaaliya.
Xogaha aan heleyno ayaa sheegaya in kulanka maanta diirada lagu saarayo dagaalka ethiopia ay kula jirto waxay ugu yeereen argagixisada iyo isgaashiga labaa dowladood.
Ra’iisul wasaaraha Yahuuda ayaa kulankiisa maanta sidoo kale diirada ku saaraya sidii Israel u caawin laheyd dowlada Ethiopia, si ay amaanka dalkeeda u xaqiijiso.
Kulanka maanta waxaa Soomaaliya ka quseeya dhanka amaanka, maadaama Ethiopia ay ciidamo ak joogaan dalka Soomaaliya, waxaana sidoo kale ka quseeya in ra’iisul wasaaraha Yahuuda uu doonayo in arimaha Soomaaliya markaan uu faragelin ku yeesho.